ဒီဇင်ဘာလ 2015 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » ဒီဇင်ဘာလ
Yu + ပူးတွဲ။ Downtown Los Angeles မြို့က Grand Park ကနှင့် The Music ကိုရေးစင်တာရဲ့ NYELA များအတွက်ကြီးမားသောဒစ်ဂျစ်တယ်ကစားကွင်းသို့လှည့်
Los Angeles မြို့ 2016 ဆင်းရေတွက်အဖြစ်ပထမဦးဆုံး-of ယင်း၏-ကြင်နာစွဲငြိဖွယ်ရာမျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောခုနှစ်, ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံရိပ်မြို့တော်ခန်းမ, ထိုမှတ်တမ်း၏ကောင်တီခန်းမနှင့် The Music ကိုရေးစင်တာရဲ့ဒေါ်ရသီ Chandler Pavilion အကြား "တုံ" ကိုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဟောလိဝုဒ်-တွင်နှစ်သစ်ကူးဧဝမြို့တွင်း Los Angeles မှာသုံးအထင်ကရအဆောက်အဦးရှေ့တှငျတှေ့မွငျရဘာမှမတူပဲစီမံကိန်းမြေပုံ display ကိုများအတွက်ပတ္တူပေးပါလိမ့်မယ်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ...
မှတ်တမ်းတင်ခြင်းကွင်းဆင်း၏ဗီဒီယိုဖုန်းများအတွက် '' Highly မျှော်လင့် Pix-E7 အခုတော့သင်္ဘော Pix-E စီးရီးအတွက် Precision စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်အဆင့်မြင့် 4K မှတ်တမ်းတင်မိသားစု REEDSBURG, WI မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်နယူးခုနစ်လက်မမော်ဒယ်စောင့်ကြည့်, ဒီဇင်ဘာ 28, 2015 - ဗီဒီယိုဖုန်းများအတွက်ယင်းကြောင်းကြေညာဖို့ကျေနပ်ဖြစ်ပါသည် Pix-E7 4K မှတ်တမ်းတင်လယ်ကွင်းမော်နီတာယခုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတင်ပို့နေသည်။ ခုနစ်လက်မ Pix-E7 အဆိုပါ Pix-E ကိုအကြီးဆုံးမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ် ...
ဒါက Ball ကိုစစ်သွေးကြွလမ်းဖွင့် - နယူးနှစ်တင်ဆက်ဘို့ Feeds!
ပထမဦးဆုံးအမှုအရာတို့ကိုပထမဦးဆုံး - ကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ကွယ်ကမကြာသေးမီအားလပ်ရက်ရာသီနှင့်အတူကျနော်တို့နှစ်သစ်ကူးဧဝကိုမီဒီယာလွှမ်းခြုံပေါ်မှာငါတို့မြင်ကွင်းများ set! "ကျနော်တို့ကတစ်ဖန်နိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်တွင်းထုတ်လွှင့်ဖို့ကိုစီးပွားဖြစ်အခမဲ့ရေကူးကန် feed ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အဖြစ်အွန်လိုင်းဆိုင်များတွင်နေကြတယ်" ဟုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဗျာဒိတ်ကျမ်းနှင့်အတူ Times Square ကနေစိတ်လှုပ်ရှားမျှဝေဖို့က Jeff Straus, သမ္မတ, နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ Entertainment က, "လို့ပြောပါတယ်။ ဒီနှစ်အခမ်းအနားဂီတဖျော်ဖြေပွဲမည်ဖြစ်သည် ...
Milwaukee ဧရိယာနည်းပညာကောလိပ်တည်နေရာ: Milwaukee WI အမေရိကန်ဗီဒီယိုနှင့်ဓာတ်ပုံဘဏ်ဍာများအတွက်လိုအပ်သည့်အချိန်နှင့်သယံဇာတခန့်မှန်းအပါအဝင် Excellent ကစီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ, ... ။ more >>
Mullen တည်နေရာ: ဘော်စတွန် MA အမေရိကန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘော်စတွန်ထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်မှုအသင်း join ဖို့နှစ်ခုလက်ထောက်အသံလွှင့်ထုတ်လုပ်သူများရှာကြသည်။ ထုတ်လုပ်မှုခန့်မှန်းချက်ပြင်ဆင်နေ ... ။ more >>
ဗီဒီယိုကိုထုတ်လုပ်သူ / Editor ကို International
Everymarket တည်နေရာ: New York ကနယူးယော့အမေရိကန်ဗီဒီယိုကိုကုန်ပစ္စည်း, Edit ကို :. မကြာခဏတင်းကျပ်စွာသတ်မှတ်ရက်အပေါ်, ထုတ်လုပ်ရန်ရိုက်နဲ့ Edit ဗီဒီယိုများ။ >> နောက်ထပ်အတွေ့အကြုံရ, ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ဆန်းသစ်သောရုပ်ရှင် / ဗွီဒီယိုကျောင်းသားများအား ... ရှာဖွေနေ
ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် / ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်တစ်ဦး
Plum ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတည်နေရာ: Rocklin, CA အမေရိကန်ဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှု, နှင့်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ထားတဲ့ In-depth ကိုနားလည်မှုကိုဝင်စား။ မြင့်မားကို Adobe Photoshop ကို, ပရီးမီးယားလိဂ်အတွက်တတ်ကျွမ်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက် ... ။ more >>
ပညာရေးဆိုင်ရာလက်ထောက်, မီဒီယာ Technician အ
aurora ပြည်သူ့ကျောင်းများတည်နေရာ: aurora CO အမေရိကန်ပံ့ပိုးမှုအသံနှင့်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များကို; စာအုပ်တွေ, ဗီဒီယို, Cassette, အသံ-အမြင်အာရုံပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် / သို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းစာရင်း Perform ... ။ more >>
1 ၏စာမျက်နှာ 4512345 » 102030...နောက်ဆုံး»